September 2018 Newsletter — 2018
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလရဲ့ သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ... ယခု စက်တင်ဘာလတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်ဟာ ဆယ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ GEN ၏ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် ယုံယုံကြည်ကြည် စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြုပ်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်အများစုရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေ၊ GEN စတင်မွေးဖွားလာကတည်းက ဒီကနေ့အထိ နှစ်ပေါင်းများစွာ ငွေကြေး၊ နည်းပညာ၊ အကြံဥာဏ်အားများဖြင့် လက်တွဲပူးပေါင်း ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါသော အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၊ ကွန်ရက်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ မပါဘဲ GEN အနေနဲ့ ဒီနေ့လို အောင်မြင်မှုတွေကုို ရရှိလျှောက်လှမ်းလာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ GEN အနေနဲ့ လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြသော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ယခုလ လစဉ်သတင်းလွှာမှာတော့ ကျား၊ မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေး ကိစ္စရပ်များမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ GEN အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဒေါ်တင်တင်လှ (ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ)၏ စကားလက်ဆောင်ကို မျှဝေထားပါတယ်။ နောက်လများမှာလည်း GEN အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်များနှင့် CU ဝန်ထမ်းများမှ မိမိတို့၏ GEN နှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံ စကားလက်ဆောင်များ ပါဝင်မျှဝေပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအား ကံကောင်းကြပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။
ယခုလို စက်တင်ဘာလအတွက် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခွင့်ရရှိသည့်အတွက် ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်မ ကျွမ်းကျင်ရာ ဘာသာပြန်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာ မိန်းကလေးများအား အကြမ်းဖက်သည့် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းများကြားတိုင်း ကျွန်မ သနားဂရုဏာသက်ရသလို စိတ်တို စိတ်အနှောက်အယှက်လည်း များစွာဖြစ်ရပါတယ်။ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်ဆီမှ NSPAW၊ CEDAW အစရှိသည့် ဗဟုသုတများစွာကို လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မအနေဖြင့် နောင်တွင်လည်း ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်အား ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စွာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ မပျော်ရွှင်စွာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ အလွန်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် တစ်နေ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများကို သိရှိနားလည်ပြီး ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု ရရှိလာမည့်အချိန်ကို စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စောင့်ဆိုင်းသွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုပါသည်။
အားလုံး အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ပြီး တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်….
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဆန်းစစ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (တောင်ကြီး)
အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဆန်းစစ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နှင့် ၇ ရက်နေ့၊၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ချယ်ရီကွင်း ဟိုတယ် (အမှတ်. ၁၁၉၊ မြင့်မိုရ်လမ်း၊ ညောင်ဖြူစခန်း ရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက် နှင့် DCA-NCA မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသော အဆိုပါအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၁၈)ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် (၃၇)ဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၄၃ ဦး (ကျား ၆၊ မ ၃၇) တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဆန်းစစ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (မန္တလေး)
အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဆန်းစစ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား စက်တင်ဘာလ ၁၂ နှင့် ၁၃ရက်နေ့၊၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ရတနာသိင်္ဂီဟိုတယ်၊ ၈၃ လမ်း ၂၆x၂၇ ကြား မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာတန်းတူညီမျှရေး ကွန်ရက် နှင့် DCA-NCA မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသော အဆိုပါအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၂၁)ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် (၄၀)ဦး အပါအဝင် လူဦးရေ (၄၄) ဦး (ကျား ၁၄၊ မ ၃၀) တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအား စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ မိတ်ဆွေများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ စုံညီစွာ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရဌာနာဆိုင်ရာများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သံရုံးများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၊ ကျား၊ မ ရေးရာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့များ၊ Private Sector မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ UNOPS၊ NGOs နှင့် INGOs များမှ တက်ရောက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ သုံးရက်တာ CCL Training အား ၂၀၁၈ ခှုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ရက်၊ ၂၀ရက်နှင့် ၂၁ရက်နေ့များတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်ရုံးနှင့် နယ်ရုံးများမျှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထာဝရဖဲကြိုးဖြူ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်"နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းမီဒီယာများသို့ မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနား
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေး (၁၆) ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု၏ အစီအစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် "ထာဝရဖဲကြိုးဖြူ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်"နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းမီဒီယာများသို့ မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားအား၂၇.၉.၁၈ (ကြာသပတေးနေ့) တွင် Orchid Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသည် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် ရုပ်ရှင်ကားများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန် ဖိတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပညာရေးနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်မှကျင်းပသော ပညာရေးနှင့် ကျား၊ မ ရေးရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Melia Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒေါက်တာဇော်လတ်ထွန်း (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး သုတေသ၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန) အပါအဝင် သင်ရိုးဌာနများမှ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းဘာသာရပ်အလိုက် သင်ရိုးရေးဆွဲသူများ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိများနှင့် ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၉၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
GEN ၏ ကုိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့သော အစည်းအဝေးပွဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
GEN၏ Progr am Manager၊ Training Coordinator၊ ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်တစ်ဦးနှင့် ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးတို့သည် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၌ International Rescue Committee မှ ပြုလုပ်သော GBV Emergency Preparedness & Response Training of Trainers အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
GEN၏ အကြံပေး သည် စက်တင်ဘာလ ၇ ရ က်နေ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Central Hotel Yangon၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော Community Consultative Meeting on Family Planning အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသ ည်။
GEN၏ Program Manager သည် CARE International in Myanmar မှ စက်တင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော Evidence Based Advocacy Development Workshop တွင် Guest Speaker တစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပြီး PoVAW ဥပဒေရေးဆွဲရေးကိစ္စရပ်များနှင့် MNCW နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
GEN၏ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ Fair Wear Foundation မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် စီစဉ်ပြုလုပ်သည့် သင်ကြားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော "Study Visit to India" တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဤခရီးစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှုးများအား အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများတွင် ဖြစ်ပွါးနေသော ကျား၊ မ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ထိပါးနှောက်ယှက်မှုများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အလေ့အကျင့်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် စီးပွါးရေးကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေးသမ္မဂ္ဂ၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ် (၁၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
တစ်ရက်တာ Gender and Labour အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် Green Hill Hotel ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၂၂) ဦး (ကျား ၄၊ မ ၁၈) တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အလုပ်ခွင်အတွင်းရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတွင် ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်းတာနိုင်သော အညွန်းကိန်းများဖော်ပြရန်နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
GEN၏ ညွှန်ကြားရေးမှုးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော “Women’s Forum Singapore 2018: Bringing worlds for inclusive innovation” အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ စီးပွါးရေး၊ အစိုးရ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် အခြားကဏ္ဍများမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ထိရောက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရရှိနိုင်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အစီရင်ခံစာများအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
GEN၏ ညွှန်ကြားရေးမှုးသည် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် [မြန်မာနိုင်ငံ] (WLB) မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမျိုးသမီးများဖိုရမ်တွင် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
GEN၏ အကြံပေး သည် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရ က်နေ့၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Sedona Hotel Yangon၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော Workshop on Standards for Living Arrangements and conditions for Domestic Workers အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသ ည်။
GEN၏ နည်းပညာအကြံပေးနှင့် ပဲ့ကိုင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်နွယ်ဇင်ဝင်းတို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Park Royal ၌ UN Women မှ ကြီးမှုးကျင်းပသော Validation workshop on the Strategic Note, 2019-2021 အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
GEN၏ နည်းပညာအကြံပေးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် လူဦးရေလေ့လာမှု ဘွဲ့ကြိုနှင့် ဘွဲ့လွန်အစီအစဉ်များ၏ ထိရောက်မှုအား အကဲဖြ တ်ကာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် ကျား၊ မ ရေးရာနှင့် တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှုအသစ်များအား ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် UNFPA မှ ပြုလုပ်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေး ပွဲအား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
GEN၏ နည်းပညာအကြံပေးနှင့် Program Manager တို့သ ည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်စင်တာတွင် ပြုလုပ်သော ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စံသတ်မှတ်ထားသော သတင်းစကားနှင့် အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းအား မတူညီသော ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှုးများအကြားတွင် တူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များ ရရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သံရုံးများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ UN အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
GEN၏ နည်းပညာအကြံပေးနှင့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုးတို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ Kempenski Hotel ၌ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် DFID တို့ ပူးတွဲပြုလုပ်သော Disability Inclusive Development Forum အား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ မသန်စွမ်း ပုဂ္ဂိုလ် များအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်ရေးနှင့် မသန်စွမ်း ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေနှင့် မူဝါဒများအား အလေးထားဆွေးနွေးသော စကားဝိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
GEN၏ နည်းပညာအကြံပေးသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Green Hill Hotel ၌ UNHCR နှင့် UN Women တို့ ပြုလုပ်သော Gender Analysis of the Right to Citizenship in Myanmar အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် သုတေသန အစီိရင်ခံစာ၏ တွေ့ရှိချက်များအား ပြန်လည်မျှဝေကာ ပြည်တွင်းရှိ အဓိကကျသော အမျိုးသမီး အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ရက်များနှင့် အခြား ကျား၊ မ ရေးရာ လှုပ်ရှားသူများသည် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျား၊ မ ရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ GEN ၏ နည်းပညာအကြံပေးသည် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ကာ ကျား၊ မ ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဖော်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ရက်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို အလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။